Zuva: Ndira 10, 2020
1 (mumwe) Secretary Secretary weTurkey Consulate General yeToronto anofanirwa kugamuchirwa pachinzvimbo cheMunyori. II) kukodzera FOR Scholarships: 1. kuva mugari reRepublic of Turkey, 2. Kuongorora Date 41 makore [More ...]
Abdullah Gül Yunivhesiti (AGU) yakasaina chibvumirano chekudyidzana neDeutsche Bahn (Germany Railways), ndiyo huru kambani yekufambisa uye zvinhu munyika uye mutyairi mukuru wechitima muEurope. AGU [More ...]
Bhizinesi rechitima reBursa rekutakura vanhu richashandisa simba rezuva kutora pasi magetsi. Bhizinesi rechitima reBursa rekutakura vanhu richashandisa simba rezuva kutora pasi magetsi. Bursa Transportation Co inyanzvi yeBursa Metropolitan Municipality. (BURULAŞ), ine chirongwa chakatangwa 'Solar Energy [More ...]
KuMecidiyeköy metro station, vadzidzi vechikoro chesekondari vakaronga chiitiko chekuzivisa vanhu kuti vatarise mutemo wekutakura vanhu. Vadzidzi avo vanomiririra nhangemutange yekumhanyisa kune nzira yepasi pevhu, vanomiririra hunhu nemaforita avo nemabhurocha. [More ...]
Mutungamiri we CHP Kemal Kılıçdaroğlu akataura ku düzen Channel Istanbul Workshop İ yakarongedzwa neIMM. Dik Isu tasvika pakadaro zvekuti vanosimudza chikafu chakapihwa vadzidzi ve kuyunivhesiti. Tarisa uone mari yehama nehama dzevakadzi dzaJuly 15 masowe [More ...]
SANGANO rakanaka rebato Meral Akşener akataura ku İstanbul Channel Istanbul Workshop İ yakarongedzwa neIMM. Akşener akati, "Chiteshi hachina kutariswa kuIstanbul kwemakore 9. Ivo vanoti 'Ecdat ecdat' [More ...]
Iyo "Channel Istanbul Workshop tarafından yakarongedzwa neIMM yakatanga nekupindirana kwemutungamiriri we CHP Kemal Kılıçdaroğlu uye GOOD Party Sachigaro Meral Akşener. Ekrem İmamoğlu, Mutungamiri weIstanbul Metropolitan Municipality, vakaita hurukuro yekutanga, "Istanbul, Kanal [More ...]